एलोपेसिया अरेटा भनेको के हो? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 31, 2021 मार्च 29, 2021 सिल्भिया जेम्स एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, विशेष समाचार, स्वास्थ्य, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B
कपालको अनुहारको अनुहार वा अनुहार वा तपाईंको शरीरको कुनै अन्य भागमा हुने कपाल झर्ने सानो प्याचको अनुभव हुन सक्छ।
स्क्याल्पमा तपाई दुबै पक्षको तुलनामा एक तिर टक्कै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
कपाल झर्ने को एक पर्याप्त मात्रा को एक छोटो अवधिको अवधि मा हुन्छ।
यो सँधै यो रोगको शुरूआतमा उपचार गर्न सिफारिस गरिन्छ। सबै भन्दा राम्रो को लागी एलोपेसिया areata उपचार पुणे माजब तपाई यी लक्षणहरू मध्ये केही भेट्टाउनुहुन्छ, एक शीर्ष अस्पतालहरू भ्रमण गर्नुहोस्।
लक्षणहरू जुन यस रोगलाई प्रदर्शन गर्दछ:
यस छालाको रोगका लागि सही लक्षणहरू पत्ता लगाउन सम्भव छैन किनकि बिभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न लक्षणहरूमा देखा पर्दछन्। केही व्यक्तिले यस प्रकारको कपाल खेर अस्थायी रूपमा अनुभव गर्दछन्, जबकि केहि स्थायी रूपमा प्रभावित हुन्छन्।
तर त्यहाँ केहि समान लक्षणहरू भेटिए कि सबैजनाका लागि हुन्छ जुन एलोपेसिया areata बाट प्रभावित छ। त्यसोभए, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं यस छालाको रोगले प्रभावित भएको हो भने, त्यसोभए तपाईंले यी सामान्य लक्षणहरू जाँच गर्नुपर्नेछ:
एकै साथ तपाईले एक भागमा कपाल झर्ने अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र शरीरको विभिन्न भागहरूमा कपाल फेरि देख्न सक्नुहुन्छ।
यस रोगबाट प्रभावित सबैलाई उपचारको आवश्यक पर्दैन।
यस रोगको कारण के हो?
एलोपेसिया एरिटा एक ऑटोइम्यून रोग हो, जसको मतलब यो हो कि जब यो रोग हुन्छ जब तपाईको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य कोषहरू विरूद्ध लड्दछ (यस अवस्थामा, राम्रो कपाल कोषहरू) र भाइरस र ब्याक्टेरियाले भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
अनुसन्धानका धेरै अंशहरूका आधारमा विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि धेरै जसो अवस्थामा यस रोगको केही प्रकारको आनुवंशिक सम्भावना हुन्छ। र यो बाहिर जान्छ, करीव २०% मानिसहरुमा यो रोग लागींको एक परिवारको सदस्य छ जो पनि यो मुद्दाको अनुभव गर्दछ। यसलाई एक जटिल बहुभुज रोग भनिन्छ, यसको मतलब यो बहु जीनसँग अन्तर्क्रियाको कारण उत्पन्न हुन्छ।
यसैले तपाईलाई एल्पोसिया इराटा विकसित गर्ने सम्भावित सम्भावना बढि छ यदि तपाईसँग नजिकको आफन्त छ भने जो यस रोगले ग्रस्त छ। मौका अधिक बढेको छ यदि ती व्यक्तिले experienced० वर्षको उमेर भन्दा पहिले यो अनुभव गरे।
बहुमत कपाल समस्याको एक महत्वपूर्ण कारण तनाव हो। तनाव आफैं एलोपेसिया areata को कारण को लागी जिम्मेदार छैन, तर यो cortisol नामक एक भड़काउने हार्मोन शुरू गर्दछ कि यो अवस्था पैदा हुन को कारण।
यस अवस्थाको लागि पछ्याउन सकिने उपचारहरू:
यस रोगबाट प्रभावित सबैलाई उपचारको आवश्यक पर्दैन। हल्का रोग को मामला मा, मान्छे कुनै उपचार वा औषधि बिना समय अवधिमा कपाल regrowth को एक पर्याप्त मात्रा को अनुभव।
जे होस्, केही व्यक्तिलाई उपचारको आवश्यक पर्दछ व्यक्तिको प्रतिरक्षा र रोगको गम्भिरताको आधारमा। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, निम्न उपचारहरू सहयोगी हुन सक्छन्:
एन्थ्रलिन सामान्यतया सोरायसिस भनेर चिनिने एक फरक छाला रोगको उपचार गर्न फेला पारिएको थियो, तर पछि यो हल्का खालित्य एरियाटाका साथ मानिसहरूलाई निको पार्ने फेला पर्‍यो। यो उपचार सुरक्षा संगै गरिनु पर्छ किनकी यसले छाला र आँखामा जलन पैदा गर्दछ। सामान्यतया, एन्थ्रलिनको प्रयोगले, प्रभावित व्यक्तिले hair--4 महिना भित्र कपाल पुन: वृद्धि अनुभव गर्न सक्दछ।
सामयिक इम्युनोथेरापी बिरामीहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपचारहरू हो जुन उनीहरूको स्क्याल्पमा समस्याहरू समाधान गरिरहेका छन्। यस उपचारको बखत, पदार्थलाई त्यस क्षेत्रमा लागू गरिन्छ जहाँ व्यक्तिले कपाल खेर गएको छ। यस पदार्थले खुजली, जलन, र स्केलिंगको कारण गर्दछ, जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा कपालको पुन: वृद्धि हुन्छ।
यदि तपाइँ एलोपेसिया areata को लागी यो उपचार अभ्यास गर्न चाहानुहुन्छ भने, एक अनुभवी छाला चिकित्सक पत्ता लगाउने जो पुणे मा यस खालित्य areata उपचार संग व्यवहार गर्दछ उत्तम विकल्प हुनेछ।
मिनोक्सिडिल एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशियाको उपचार गर्नको लागि एक स्वीकृत औषधि हो, जुन अन्यथा पुरुष पैटर्नको कपाल झर्ने भनेर चिनिन्छ र हल्का खालित्य एरियाटाका साथ पनि उपयोगी फेला पर्दछ। यो उपचार गम्भिर एलोपेसिया areata वा पूर्ण टाउकोको कपाल झर्ने मानिसका लागि प्रभावकारी छैन।
यस उपचारमा दिनको दुई चोटि कपाल झर्ने क्षेत्रमा फोम फार्मुलेसन लागू गर्नु समावेश छ, र यो अर्को उपचारको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामयिक मिनोक्सिडिलले कपालको फोलिकल्सको बृद्धि चरण लम्बाउँछ र कपालको बृद्धि हुन्छ। यस उपचारले १२ हप्ता भित्र रोगीका लागि अपेक्षित परिणाम दिन्छ।
सांप्रदायिक समाचार कपाल को स्याहार कपाल हेयरलास स्वास्थ्य